कोरोनाको त्रासले बालबालिकामा पर्ने प्रभाव र अभिभावकले ध्यान दिनैपर्ने ११ कुरा
भट्ट बालबालिकाको क्षेत्रमा विगत १८ वर्षदेखि कार्यरत छन् । हाल उनी बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालमा रााष्ट्रिय शिक्षा विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
विभिन्न समयमा देखिने महामारीले मानव जीवनमा गम्भीर असर पार्दै आएको छ । यही क्रममा नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीनबाट शुरू भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असरले आज विश्व समुदाय त्रसित छ । यो भाइरस सर्वप्रथम २०७६ पुस १५ गते चीनको हुबेई प्रान्तमा देखा परेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनकोे तथ्यांकअनुसार यसका कारण हालसम्म १६ हजार ३ सय ६२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३ लाख ७५ हजार ४ सय ९८ जना यसबाट संक्रमित भइसकेका छन् ।
विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत यसका विरुद्ध लड्न संकटकाल घोषणा गरेको छ । विश्वभरका अधिकांश मुलुकहरूमा दिन प्रतिदिन यसले तीव्र रूपमा असर पारिरहेको छ । यसको गम्भीर असर विश्व अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । यसले गर्दा अन्य सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन् ।
साझा सवालका रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सबै सार्क सदस्य राष्ट्रहरू एकजुट भएका छन् तापनि विषयगत रूपमा के गर्ने भनेर ठोस कार्ययोजना भने बन्न बाँकी नै छ । खासगरी शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गर्नेबाहेक बालबालिकाहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिने सवालमा ठोस योजना बनिसकेको छैन । युनेस्कोका–अनुसार कोभिड १९ कै कारण विश्वभरि लगभग ८४९.४ करोड बालबालिका तथा युवाहरू प्रभावित भएका छन् ।
कोभिड १९ ले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष असर पारिसकेको छ । बिरामीको पहिचान, परीक्षण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा सरकारले लागि परेको छ ।
विद्यालयहरूले कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै सञ्चालन गरिसकेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केही समयका लागि पठन पाठन तथा विद्यार्थी भर्ना नगर्न अपिल गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अर्को शैक्षिक शत्र शुरू नहुञ्जेल ३५ हजार ०५५ विद्यालयका करीब ७० लाख बालबालिकाहरूले अब घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना बालबालिकाले वर्षभरि तयारी गरेको एस.ई.ई परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । दिनभरि आफ्ना साथीहरूसँग रमाइलो मान्दै सिकिरहेका वा समय बिताइरहेका बालबालिकाहरूलाई घरभित्रै बस्नुपर्दा निश्चितरूपमा केही मानसिक समस्या पार्न सक्छन् ।
स्मरणीय छ– जुनसुकै प्रकोप, महामारी वा जटिलतामा बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा अशक्त वृद्धवद्धाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् ।
यहाँ यस्तो जटिल परिस्थितिमा बालबालिकाको सिकाइलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही व्यावहारिक अनुभव तथा अभ्यासहरू प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।
१. सम्बन्ध विस्तार गरौं र बालबालिकासँगै पढौं: लगातारको पढाइ र परीक्षाले गर्दा बालबालिकाहरू थकित भएका हुन सक्छन् । उनीहरूलाई राम्रोसँग आराम गर्न दिऔं, उनीहरूसँग कुराकानी गराँै र सम्बन्ध बिस्तार गरौ । उनीहरूको रुचि र चाहनाअनुसारका कथा, कविताका किताबहरू किनेर दिऔं । स्वभावैले उनीहरू कथा पढ्न, सुन्न र गीत गाउन रमाउने छन् । उनीहरूसँग रमाइला कथाहरू पढौं र सुनाऔं । कथाका बारेमा अन्तक्र्रिया गरौं । उनीहरूलाई कथा पढ्न लगाऔं र आवश्यकताअनुसार यसमा सहयोग गरौं । कथाका पात्रका बारेमा सोधौं र छलफल गरौं । तिमीलाई कथाको कुन पात्र मन पर्‍यो र त्यो पात्रलाई कोरोना भाइरस लाग्यो भने के गर्ने होला भनेर सोधौं । विषयवस्तुलाई समसामयिक र रोचक बनाऔं । बालबालिकाहरूमा पढाइप्रति चासो जगाउने काम गरौं ।
२. कला र सिर्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी गराऔं र सिकाऔं: बालबालिकालाई आफ्ना वरिपरि भएका वस्तुहरूको चित्र बनाउन लगाऔं । कम्तीमा उनीहरूलाई मनपर्ने वस्तुका चित्र कोर्न लगाउन सकिन्छ । बालबालिकाहरू कार्टुन भनेपछि प्रफुल्ल हुन्छन् । कोरोनाबाट बच्ने उपायबारे कार्टुन वा चित्र बनाउन लगाऔं । हामी अभिभावकहरूले बालबालिकाले बनाएका चित्र वा कार्टुन हेरेर प्रशंसा गरी थप हौसला दिने गरौं । भनिन्छ, मनको कुरा व्यक्त गर्न चित्रकला उत्तम उपाय हो । उच्च प्रशंसा नै बालबालिका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्छ । बालबालिकालाई पेन्टिङ्गजस्ता क्रियाकलापमा समेत संलग्न गराउन सकिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरूको सरसफाइ, सुरक्षा संवेदनशीलता जस्ता कुरामा अभिभावक सचेत रहन आवश्यक छ ।
३. परियोजना कार्यमा संलग्न गराऔं र सिकाऔंः बालबालिकाहरूमा नयाँ कुरा सिक्ने तीव्र इच्छा हुन्छ भने तदनुकूलको वातावरण निर्माण गरिदिनु अभिभावकको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । बालबालिकालाई कुनै समस्या दिऔं र त्यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने समय दिऔं । हामीले मनाउने चाडपर्व, हाम्रो खानेकुरा, हाम्रो पहिरन, अनि हाम्रो वरपरको वातावरणबारे छलफल गर्न लगाऔं । बालबालिकाहरू तपाईं, हामीकहाँ प्रश्नको भारी बोकेर आउन सक्छन् । ती प्रश्नहरूको सही जवाफ दिन पनि हामी तयार हुनुपर्दछ ।
४. घरायसी कामबाट सिकाऔं: कक्षा १ देिख ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमका आधारमा अभिभावकले घरमा नै बहुविषय र व्यवहारकुशल सीप सिकाउन सक्छन् । अन्योल भएमा स्थानीय शिक्षकको सहयता लिऔं । हामी अभिभावकले पनि बालबालिकालाई विभिन्न घरायसी काममा संलग्न गराएर सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्छौं । जस्तै भान्सामा पाइने वस्तुका नाम भन्न लगाएर पठन सीपका क्रियाकलाय सिकाउन सकिन्छ भने ती वस्तुहरूबाट नै गणितीय सीप सिकाउन सकिन्छ । जस्तै २ वटा गिलास र २ वटा कचौरा जोड्दा कति हुन्छ ? ४ वटा गिलासमा २ वटा हराए भने कतिवटा गिलास बाँकी रहन्छन् ? यस्ता प्रश्न गर्दै बालबालिकामा भाषिक तथा गणितीय सीप सिकाउन सकिन्छ ।
५. घरको सरसफाइमा संलग्न गराऔं र सिकाऔं: बालबालिकालाई कोरोनाले पारेको नकारात्मक प्रभावबारे राम्रोसँग भनौं र यो कसरी सर्छ भन्ने कुरा पनि सिकाऔं । यसपछि बालबालिकालाई मस्तिष्कलाई व्यायाम हुने विभिन्न प्रश्नहरू गरौं । अब हामीले कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने सोधौं र छलफल पनि गरौं । छलफलका आधारमा बालबालिकालाई आफूसँगै राखी साबुन पानीले हात धुने तरिका, घर आँगन र आफ्नो लुगा कपडा कसरी सफा राख्ने भन्ने बारे पनि सिकाऔं । बालबालिकालाई यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न गराउँदा पछिसम्म पनि यसको राम्रो असर पर्छ र विद्यालयमा पनि उनीहरूमा सरससफाइ गर्ने बानीको विकास हुन्छ । बालबालिका स्वयंलाई आत्मसुरक्षामा अभ्यस्त बनाऔं ।
६. अभिनयका माध्यमबाट सिकाऔं: कोभिड १९ को प्रभाव र यसबारे बालबालिकाहरूसँग छलफलपछि उनीहरूलाई विभिन्न भूमिका दिएर अभिनय गर्न लगाऔं । जस्तैः हामी आमाबुवा बिरामी बनौं, छोराछोरीलाई स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर) को भूमिका दिऔं, अनि सोधौं लौ भन अब हाम्रो उपचार कसरी गर्छौ ? यस्ता अभिनयले बालबालिकाका मस्तिष्कमा विभिन्न प्रश्नहरू खेल्न थाल्छन् । यस्तै प्रश्नहरूले बालबालिकाहरूलाई रचनात्मक बनाउँछ साथै भविष्यका बारेमा योजना बनाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ । अभिनयले बालबालिकामा समूहमा बसेर काम गर्ने बानीको विकास पनि गर्न सहयोग गर्छ । यसरी नै सामाजिकीकरणको समेत विकास हुन्छ । हामी बालबालिकाहरूलाई मन पर्ने गीतमा नाच्ने वातावरण पनि बनाइदिऔं ।
८.जानकारी दिँदै सिकाऔं: प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकाहरूलाई रोग लाग्यो भने उपचार गर्न कता जाने अनि त्यहाँ गएर कसलाई भेट्ने भनी पेशासँग सम्बन्धित जानकारी दिएर स्वास्थोपचारका बारेमा सरल तरिकाले सिकाउने प्रयास गरौं । जस्तै विद्यालयमा शिक्षक हुन्छन्, अस्पतालमा डाक्टर हुन्छन् भने कुन–कुन कार्यालय या स्थानमा के कस्ता पेशाकर्मीे हुन्छन् भनेर सिकाउन सकिन्छ । कोरोनाजस्तो समसामयिक विषयवस्तुका बारेमा जानकारी माग्न कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ भनेर बालबालिकालाई फोन गर्न लगाएर गणितीय सीपसँगै सम्बन्ध विस्तार जस्ता व्यवहारकुशल सीप सिकाउन सकिन्छ ।
९. समाचार हेरौं, सुनौं र छलफल गरौं: विश्वमा कहा–कहाँ के–के भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा बालबालिकालाई सिक्ने र बुझ्ने अवसरका रूपमा टीभी, रेडियोजस्ता सञ्चारका माध्यमको प्रयोग गरौं । बालबालिकासँग समाचार हेरौं, सुननौं र छलफल गरौं । बालबालिकालाई सुनेर बुझेका कुराको नोट बनाउन लगाऔं । यसले बालबालिकामा सकारात्मक बानीको विकास हुन्छ । उनीहरूमा ध्यान दिएर सुन्ने सीपको विकास हुन्छ । राम्रोसँग सुन्न सकिए मात्र बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ । दैनिक नोट बनाउन लगाउँदा लेखन सीप पनि राम्रो हुन्छ । यसका लागि अभिभावक स्वयं नमूना हुन आवश्यक छ । शिक्षाका लागि उपयुक्त अन्य माध्यम जस्तै यूट्युब पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर अभिभावकले समय व्यवस्थापन, सीमा निर्धारण र सही प्रयोगमा विषेश ध्यान दिन आवश्यक छ ।
१०. शारीरिक क्रियाकलापमा सहभागी गराऔं: बालबालिकाहरूलाई अहिलेको जटिल परिस्थितिमा घुमफिर गर्न र भेला हुन प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसले गर्दा उनीहरूको शारीरिक विकासमा असर पर्न सक्छ । त्यसैले बालबालिकालाई घरभित्रै, आँगन वा खेतबारी जहाँ मान्छेहरूको भीडभाड हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा लगेर व्यायाम गर्न लगाउन सकिन्छ । यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँगको सल्लाहअनुसार कति जनासम्मको समूह बनाउन सकिने कुराको यकिन गरी सोहीअनुसारको समूहमा खेलकुद वा शारीरिक व्यायाम गराउन सकिन्छ । यसका लागि योग पनि एक उपयुक्त अभ्यास हुन सक्ला तर यो बालबालिकाको उमेर र विकासक्रम सुहाउँदो भने हुनुपर्छ ।
११. जीवनोपयोगी तथा व्यवहारकुशल सीपको अभ्यास गर्न सिकाऔं: कोरोनाका बारेमा बलबालिकाले विभिन्न भ्रमपूर्ण कुराहरू सुनेका हुन सक्छन् । यसले बालबालिकामा डर, त्रास उत्पन्न्न गराएको हुन सक्छ । मानसिक डर, त्रासले गर्दा बालबालिकाको वर्तमान र भावी जीवनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको सिकाइमा पर्न जान्छ । त्यसकारण बालबालिकालाई विभिन्न समस्या आउँदा कसरी समाधान गर्ने, प्रभावकारी सञ्चार कसरी गर्ने र त्यस्तो समयमा सही निर्णय कसरी लिने भनेर सिकाऔं । यसले बालबालिकालमा आत्मविश्वास बढ्छ र उनीहरूको सिकाइमा नकारात्मक असर पर्दैन ।
अन्त्यमा, संकटको यस परिस्थितिमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गर्दै सबै नीति निर्माण तहमा काम गर्ने निकायहरू, अभिभावकहरूले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ३ सम्मका बालबालिकाहरूलाई माथी उल्लेखित सिकाइका क्रियाकलापमा सहभागी गराउन प्रोत्साहन गरौं । घरपरिवार नै बालबालिकाको पहिलो विद्यालय भएकाले प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकालाई घरमै आनन्ददायी वातावरणमा शिक्षण सिकाइमा सहभागी गराऔं र बालबालिकाहरूमा माथि पर्न सक्ने असर न्यूनीकरणमा समयमै सक्रिय बनौं ।
दुर्घटनामा एकको मृत्यु तीन घाइते
चीनद्वारा अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न सुधार कार्यक्रमको घोषणा
युवकको बगेर मृत्यु
पहिरोबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई गण्डकी सरकारद्वारा आर्थिक सहयोग
सुन्दर यातायातले म‌ंगललबारदेखि बस सञ्चालन गर्ने